Maamulka Degmada Deeyniile oo wax weeyn ka Qabtay Baahida Wadooyinka – Balcad.com Teyteyleey
Maamulka Degmada Deeyniile oo wax weeyn ka Qabtay Baahida Wadooyinka
Degmada deeyniile oo ah mid kamid ah 17 degmo gobolka banadir kana mid ah degmoyinka ugu dhulka baxada weyne ay kajirtay baahi xoogan dhanka wadooyinka. sanadahii dambe amaanka iyo xasiloonida deeganka oo wacan awgeed ayaa waxaa ay noqtay meel soo jidatay in dhaha dad badan oo halkaa degay.
Cabdiwali Nuur Faarax Gudoomiyaha degmad Deeynille waxqabdkiisa 100 ka malin waxaa kamid ah dhismaha wadooyinka waaweyn iyo kua yar oo xafada dhexdooda. waxaana uu xariga ka jaray wadadii ugu dambeyse oo la dhisay taa ah wadadii 5 shanaad. wadooyinka aya ah kuwo aad u dhaadheer waxana laga dhigay dhagax iyo carakwoo wado jaay ah oo ay isticmalikaraan dadka iyo gadiidka.
Cabdiwali Nuur Faarax Gudomiyaha ayaa partiisa bulsho soo dhiga waxqabadkiisa oo ay ka midtahay iskulaad caruurta danta yar loo furay, wadooyin cusub oo ladhisay iyo adeegyo caafimad oo laga hirgeliye degmada. maamulka ayaa waxaa sameye qorshe maamleed dhanka degmada waxaan jirta maalmo uu qabilo bulshada, askarta, garsoorka, dhaliyarada. iyo ganacsatada iyo bulshada rayidnka
maamulka aya waxaa kale bartiis bulsho ku sheegay in ay shaqaleeyn dhalinayro badan oo kor u dhafeyso 120 kuwa oo ay ka midyahiin dadka naafada. maamulka ayaa waxaa u muuqda mid tixgelin qaas ah siinaya dadka naafada, agoonta iyo dadka laga tirabadanyahay oo aan horay u heysan xaquuqaad, tixgeli bulshada dhexdeeda ah iyo dadka soo barakacay.
Cabdiwali Nuur Faarax Gudomiyaha Demada deeyniile waxaa uu helay taagero aad u badan kadib markii noqday mid maalinkasta update ka dhigo dadka deneyo arimaha degmad iyo saxaafada oo si fudud halkaa uga qaata warbixinada degmada.
degmada deyniile ayaa u muuqato mid kasoo kabaneyso dhibatiid xogeeyn ay ka dhaxashay dagalada sokeey iyo duqeeymo joogto ah iyo qaraxayo kaladuwan. milkiilyasha gadiidka dadweynaha iyo shacbiga rakaabka gadiidka dadweyne aya si farxadleh usoo dhoweeye arinka dhismaha wadoyinka.
The post Maamulka Degmada Deeyniile oo wax weeyn ka Qabtay Baahida Wadooyinka appeared first on Ilwareed Online.